Na dia ny fanafoanana ny baiko sasany any ivelany aza
“Na dia nateraky ny valan'aretina aza ny fanafoanana ny baiko sasany tany ivelany, tsy nanantena ny hahazo baiko be dia be aho tamin'ny fianteherana tamin'ny fandefasana mivantana androany. Tena lozam-pifamoivoizana tena tsara! ” Ny tolakandron'ny 30 Mey, Zhu Li, filohan'ny Plume Piano Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd., izay nasaina handray anjara amin'ny fandaharana mivantana faharoa an'ny "Huangpi Intelligent Manufacturing Mulan Boutique", dia faly tokoa fa farany nahazo tombony tamin'ny fandefasana mivantana ny e-varotra tamin'ny voalohany.
Plume Piano Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd. dia orinasam-pamokarana zavamaneno misy ao amin'ny Xinlong Tengfei Industrial Park, Hengdian Street, Huangpi, manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny rindrambaiko, ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana, ny famokarana ary ny marketing amin'ny marika piano, telozoro piano, piano elektrônika ary piano piano intelligence. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2017, Plume Piano dia nifantoka tamin'ny tsena any ivelany. Maherin'ny 95% ny vokatra vokariny amina firenena sy faritra maherin'ny 50 manerantany. Ny volan'ny varotra dia nahatratra USD 190 tapitrisa tamin'ny taona 2019 ary nampiseho fironana fitomboana isan-taona.
Tamin'ny volana Janoary 2020, Zhu Li dia nanao sonia kaomandy mitentina 21 tapitrisa dolara amin'ireo mpanjifa taloha tao amin'ny foara fampitaovana zavamaneno iray, izay nokasaina halefa tamin'ny volana Jona, saingy taorian'ny fiverenany tamin'ny 22 Janoary dia nanafoana ny baikon'ny mpanjifa vahiny sasany noho ilay valanaretina. Zhu Li dia nanandrana nifampiresaka tamin'ireo mpanjifany taloha izay nanantena ny hamerina ilay fatiantoka, saingy tsy namaly ireo mailaka 200. “Nitomany ara-bakiteny aho ary tsy hitako izay hatao.” "Hoy i Zhu Li.
Tamin'ity indray mitoraka ity handray anjara amin'ny governemantan'ny distrika nandamina e-varotra mivantana, i Zhu Li dia tsy nanana finoana tamin'ny voalohany. Tsy nampoizina, ny 90 minitra fandefasana mivantana dia nahazo baiko piano nomerika 3. “Androany no voalohany hanandrana ny e-varotra mivantana. Tsy azoko taloha. Tsy nampoiziko hoe tsara ny vokany. ” 'Na dia voakasiky ny valan'aretina aza ny varotra, ny governemanta dia nametraka ny fototry ny orinasa hihira sy manampy anay hanitatra ny fantsom-barotra. Ary tokony hanova ny paikadin'ny varotra isika. ' Nilaza izy fa amin'ity taona ity, ny Plume Piano dia hifindra amin'ny tsena ampitan-dranomasina mankany an-toerana, ary hampiasa ny fomba ara-toekarena vaovao amin'ny fandefasana mivantana ny e-varotra hanitarana tsikelikely ny tsena anatiny.
Fotoana fandefasana: Jul-20-2021
Kitendry Piano Smart, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Fanamboarana Piano Digital, Piano Digital Upright, Electric Grand Piano, Piano nomerika lafo vidy,